N'ogbe nkwado Wapiti Mkpa mmanu mmanu | AromaEasy
AromaEasy na-ahụ maka imepụta mmanụ dị oke mma dị oke mma site na iji nka mara mma. Site na njiri mara mma na nke na-egbuke egbuke, akwa wapiti iko a nke wapiti ga-adabara ụlọ gị dị mma.
El diffenti mmanụ a dị mkpa nke mmiri na - emebute mmiri n’ime ụmụ irighiri ihe nke na - eme ka Mmanụ a dị mkpa tinye aka na mmiri wee bunye ya na ikuku, na - ebuli uru dị mma na - agwọ ọrịa na - agwọ ọrịa.
Mkpokọta Wapiti Mkpokọta Mmanụ Mkpo Diffuser X117D
SKU: MMA Categories: All Products, Esi ísì ụtọ, Igwe diffuser
N'ogbe Wapiti Mkpochapu Mkpa mmanu mmanu
Size Product: 110 * 110 * 150mm Ibu ibu: 540g
Mbukota Size kwa otu: 150 * 150 * 180mm Mbukota ibu kwa nkeji: 680g
Ogo okike / nkeji: 615 * 465 * 200mm / 12pcs Arọ Carton: 8.16Kg
20GP akpa / nkeji 5256pcs (438ctns)
40HQ akpa / nkeji 13680pcs (1140ctns)
Lighttọ ìhè ọkụ abalị 3D dị ụtọ: N’ichepụta ihe nke ọma, iko dị mkpa dị n’ịkpa iko a gụnyere 7-Light Change LED light. Mgbe ị gbanwere onye na-agbanwe ihe n’abalị, ọkụ ga-abụ mgbakwunye mara mma na ihe ndozi ụlọ gị site na ngosipụta ngosi 3D dị egwu. Agba ọkụ na-agbanwe agbanwe na agba odo na-adọrọ mmasị, ọkachasị n’ime ụlọ gbara ọchịchịrị. Nke a diffuser nwekwara ike ịgba ọsọ n’enweghị ọkụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. You nwekwara ike ịhọrọ ma dozie otu ụcha maka ọkụ ndị na-enye mmanụ n’ọkụ.
Ọrụ Auto Auto-Off: Igwe isi a dị n'ụdị iko a na - agbanyụ ya ọkụ mgbe mmiri ga - agwụ. Ọrụ a na-echekwa nchekwa gị, yana ọrụ ogologo oge maka onwe ya kama imebi ngwa ngwa.
Obere mkpịsị mmanụ dị mkpa maka ,lọ, Yoga Studio, Office, Spa Room, Bed ime, Room Baby. Echiche onyinye zuru oke maka ezinụlọ na ndị enyi hụrụ ntụ n'anya n'anya ma ọ bụ nwee ike irite uru na ọgwụgwọ aromatherapy.